Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa Apple ka dhageysan doonta dacwadda ka dhanka ah kalsooni darrada | Waxaan ka socdaa mac
Waxay u egtahay in, mararka qaarkood, aad ogaatay in codsi qaas ah uu ka qaalisan yahay nidaamyada hawlgalka sida macruufka ama macOS marka loo eego kuwa la midka ah ee abuurayaasha kale. Iyo, tani waa wax dhaca marar badan, iyo inkasta oo horumariyeyaasha ayaa markii hore lagu eedeeyayMaaddaama ay iyagu yihiin kuwa runta go'aamiya qiimaha dalabyadooda, runtu waxay tahay in had iyo jeer aysan ahayn sidaas oo kale sidaas.
Tani waa sababta oo ah, qiimaha la saaray, ka Apple waxay ka qaataan guddi ah 30% lacagtaas lagu sheegay, taas oo ka dhigaysa horumariyayaashu inay doorbidaan inay sare u qaadaan qiimaha, si ay u helaan faa'iido la mid ah nidaamyada kale ee hawlgalka.
Sababtaas oo kale, 2011, waqti fog, koox adeegsadeyaal ah ayaa la kulmay si ay ugu cambaareeyaan shirkadda Apple keli ahaanta, maadaama tani aysan ula muuqan wax caadi ah iyaga, maadaama sidoo kale nidaamyada hawlgalka sida macruufka laga soo degsado barnaamijyada laga helo ilo kale waa "mamnuuc". Si kastaba ha noqotee, kiiska waa la xiray, Maadaama kuwii Cupertino ay xaqiijiyeen in isticmaaleyaashu aysan awood u lahayn inay dacweeyaan, maadaama ay ka qeyb galayeen dacwad laga soo bilaabo 1977, ugu dambeyntiina xaakimku wuxuu caddeeyay in dhibaatadu aysan ahayn tan Apple ee ay tahay kuwa horumariya ', tan iyo markii ay soo rogeen qiimaha, maadaama ay ahaayeen. sida la daabacay Reuters:
Apple waxay ku tiirsaneyd xukunkii maxkamada sare ee 1977 kaas oo xadidaya waxyeelada anshaxa ladagaalanka kuwa sida tooska ah culeys u saaran halkii laga heli lahaa dhibbanayaasha aan tooska aheyn ee bixiyay lacag dheeri ah oo dadka kale ay siiyeen Qeyb ka mid ah walaaca, maxkamadda ayaa sheegtay in kiiskaas, ay ka sii deyneyso garsoorayaasha inay sameeyaan xisaab celin dhaawacyo adag leh.
Si kastaba ha ahaatee, 2017, kiiska ayaa dib loo furay, sida uu xaakinku sheegay in Apple uu ahaa iibiyaha tooska ah ee codsiyada iTunes, waana sababta maanta waa inay ku marag furaan Maxkamadda Sare ee Mareykanka horteeda, maxaa yeelay kiiska ayaa kor loogu qaaday ilaa halkan. Waxay kuxirantahay waxa dhacaya, Apple waxaa laga yaabaa inay bixiso ganaax sare, marka lagu daro xaqiiqda ah in guddiga 30 boqolkiiba ee ay ku qaataan dalab kasta oo la iibiyo xoogaa hoos loo dhigo.
Laakiin, sida muuqata ma ahan dhammaantood, sababtoo ah sida muuqata Haddii Apple aan la isku raacin, waxay u badan tahay in cabashooyin badan oo isa soo taraya ay sii wadi doonaan inay dhowaan yimaadaan. dhinaca shirkadaha kale, oo aan ka mid noqon karno Amazon ama eBay, maadaama guddiyada sidoo kale farsamo ahaan aad u sarreeyaan, in kasta oo ay xaaladdan tahay, inta badan badeecadaha la iibiyay waa kuwo jireed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iTunes » Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa dhageysan doonta Apple ka hor dacwadda la-dagaallanka kalsoonida ee guddiyada codsiyada
Ma waxaad u raadinaysaa dhagaha raqiiska ah ee Mac-gaaga? Hadda waxaad haysataa dhammaan moodooyinka Mpow ee laga dhimay Amazon